T सुझावहरू गुगल खोजी ईन्जिनमा पहिलो हुन - क्रिएटिभोस अनलाइन | क्रिएटिव अनलाइन
यदि त्यहाँ एक दौड फर्मूला १ सर्किट भन्दा लामो छ भने, त्यो गुगल खोजी दौड हो। SEO स्तरमा, कोही पनि सार्वजनिकको लागि पहिलो हुन खोज्छ। जब कसैले शब्द लेख्छ, यदि हाम्रो अन्तरिक्षले यसको साथ काम गर्छ, हामी पहिले देखिन चाहन्छौं। ठिक छ, भुक्तानी गर्नेहरूको तल। कमसेकम हामी प्रयास गर्दछौं।
गुगलमा आफैलाई स्थान दिन एकदम गाह्रो छ र मात्र होइन सुझाव यो हाम्रो लायक छ। प्रयोगकर्ता ट्राफिक र सामग्रीको ठूलो मात्रा एक भूमिका खेल्छ। यसैले हामी लेखमा निम्न लिखित कदमहरू चाल्दैनौं। तिनीहरू परिस्थितिहरूको क्लस्टर हुन् जुन तपाईंले गर्नुपर्दछ, तर, पर्याप्त छैन, तपाईंलाई यी थाँहा छ। सामग्री ट्यागहरू, कोटिहरू, मेटा वर्णन, इत्यादिसँग अनुरूप हुनुपर्दछ। यस तरीकाले तपाईको खोजी प्रोफाइलमा दर्जा १ स्थितिको नजीक हुनेछ।
निम्न गुगल खोजी ईन्जिनमा पहिलो हुन सुझावहरू तिनीहरूले तपाइँलाई यसको नजिक ल्याउँदछ।
2 तपाइँको श्रोताको साथ ट्यूनमा
3 प्रतिस्पर्धा, पनि एक सहयोगी
4 फोटोग्राफहरू, यो भन्दा महत्त्वपूर्ण देखिन्छ
एउटा सम्पादकीय क्यालेन्डर सिर्जना गर्नाले तपाईंलाई तपाईंको सामग्री कार्यहरूलाई प्राथमिकता दिन अनुमति दिन्छ, तपाइँको ब्लग पोष्टिंग र सामाजिक गतिविधि को साथ एक ताल मा प्रवेश गर्नुहोस्। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, तपाईंको सामग्रीलाई स्थिर वा दोहोरिनबाट रोक्दै श्रोताहरूलाई व्यस्त राख्नुहोस्।
संगठन सफलताको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण छयद्यपि तपाइँको सामग्री योजना मा सजीलो रहन सँधै सजिलो हुँदैन। पात्रो सेट अप गरेर सुरु गर्नुहोस्, त्यसपछि मंथन - कुन प्रश्नहरूको जवाफ दिन सक्नुहुन्छ? कुन विषयहरू प्रासंगिक छन्? तपाईं कसरी प्रेरित गर्न सक्नुहुन्छ?
तपाईंको सामग्रीलाई सामाजिक पोष्टहरूमा, ब्लग पोष्टहरूमा, साइट प्रतिलिपिमा विभाजन गर्नुहोस्, सन्दर्भ, भिडियो, आदि। तपाईंसँग ब्लग, वेब, साइटको ढाँचामा निर्भर गर्दछ। र यसको शीर्षमा, तपाईंको पदोन्नति, किनकि सामग्री आफैंमा विरलै सफल हुन्छ, र यसको फ्रिक्वेन्सी योजना: दैनिक, साप्ताहिक, मासिक।
तपाइँको श्रोताको साथ ट्यूनमा
तपाईंको सामग्रीको फोकस भ्रमण गर्ने जनतामा निर्देशित गर्नुपर्नेछ र तपाईंको व्यवसायको सफलतामा योगदान पुर्‍याउनुहोस्। एक नयाँ आगन्तुक, उदाहरण को लागी, कुनै ब्रान्ड वफादारी छ। त्यसकारण, ध्यान केन्द्रित गर्न प्रेरणादायक सामग्री, सामग्री र लक्ष्य, र पोषण गर्न ब्रान्ड मानहरू हुनुपर्छ।
अवस्थित ग्राहकहरू, यस बीच, प्राथमिकता र आवश्यकताहरूको फरक सेट छ।, त्यसैले सामग्री बिभिन्न रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ। तिनीहरूलाई पालनपोषण, पदोन्नती प्रोत्साहन, र upsell क्षमताहरू सुविधाजनक दुबै ग्राहक सन्तुष्टि र भविष्यको बिक्री ड्राइभ गर्न कुञ्जी हो।
प्रतिस्पर्धा, पनि एक सहयोगी
तपाइँ प्रतिस्पर्धा मा व्यापार रणनीतिहरु पाउन सक्नुहुन्छ जुन तपाइँलाई श्रेय दिन सकिन्छ। त्यो हो, यदि तपाइँ इन्टर्नेटमा अत्तर बेच्नुहुन्छ, तपाइँको प्रतिस्पर्धाले प्रयोग गर्ने कुञ्जी शब्दहरू खोज्नुहोस्। यस तरिकाले तपाईं उही संवाद स्थापित गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईंको व्यवसायमा नयाँ आगन्तुकहरूलाई आकर्षित गर्न सक्नुहुनेछ। यस मार्फत, तपाईको डोमेनमा पुग्न ट्राफिकको मात्रा बढ्छ।
फोटोग्राफहरू, यो भन्दा महत्त्वपूर्ण देखिन्छ
विशेष गरी जब हामी अत्तर जस्ता वास्तविक उत्पादनहरूको बारेमा कुरा गर्छौं माथि उल्लेखित दृश्य सामग्री, जस्तै छवि, भिडियो, र इन्फोग्राफिक्स, कुनै पनि ब्रान्डको यसको पाठकहरूसँग अधिक प्रभावकारी रूपमा संवाद गर्न खोज्नको लागि एक धेरै शक्तिशाली उपकरण हुन सक्छ।
आकर्षक तस्बिरहरू (आल्ट छविहरू समावेश गर्नुहोस्) को साथ मुख्य भागलाई विभाजन गरेर तपाईंको दर्शकहरूलाई पढ्न समाप्त गर्न र खोजी इञ्जिनमा तपाईंको स्तर बढाउन प्रोत्साहित गर्न सुरू गर्नुहोस्। इन्फोग्राफिक्सले दृश्य स्क्रिनमा सामग्री कोलेट गर्न पनि मद्दत गर्दछ आकर्षक र सजिलैसँग बुझ्न योग्य।
तपाईंको साइटमा आगन्तुकहरूले पनि तपाईंलाई भिडियो सामग्री प्रस्ताव गर्न अपेक्षा गर्दछ। तिनीहरूको व्यक्तित्व देखाउनुहोस् जुन तपाईं उनीहरूसँग जडित हुनुहुन्छ जानकारी प्रदान गर्दा उनीहरूको आवश्यकताहरू पूरा गर्दछ। कसरी भिडियोहरू, डेमोहरू र ग्राहक प्रशंसापत्रहरू विचार गर्न सबै अवसरहरू हुन्।
धेरै अन्य जस्तो यो सल्लाहले हाम्रो ब्लगलाई पहिलो स्थानमा राख्न मद्दत गर्दछ। नेटवर्कमा अवस्थित ठूलो मांगको कारण अधिकतम सम्भावित पोइन्टहरू ध्यानमा राख्नुपर्दछ। यदि हामीले ध्यानमा राख्यौं कि कुनै पनि उत्पादन बेच्न वा लेख लेख्नको लागि त्यहाँ लाखौं थप साइटहरू छन्, हामीले गर्नुपर्ने थप काम। Yoast SEO जस्ता प्रोग्रामहरू मार्फत सामग्री र SEO स्थितिको रूपमा हाम्रो उत्पादनमा ठूलो महत्त्व राखिन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » Search सुझावहरू गुगल खोजी ईन्जिनमा पहिलो हुन